सेक्सनहरू सम्पादन गर्नुहोस्
तपाईँंको कागजातमा परिभाषित भएको विभागहरूको गुणहरू परिवर्तन गर्नुहोस्. विभाग घुसाउनका लागि, पाठ रोज्नुहोस् गर्नुहोस् वा तपाईँंको कागजातमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि रोज्नुहोस् गर्नहोस् घुसाउनुहोस् - विभाग.
रोज्नुहोस् ढाँचा - सेक्सनहरू
The विभागहरू सम्पादन गर्नुहोस् संवाद विभाग - घुसानुहोस् संवाद, र तलका थप विकल्पलाई अफर गर्नुहोस्:
खण्डको नाम टाइप गर्नुहोस् जुन तपाइँ सम्पादन गर्न चाहानुहुन्छ, वा सेक्शन सूचीमा नाममा क्लिक गर्नुहोस्।यदि कर्सर हाल एक खण्डमा छ भने, खण्डको नाम कागजात विन्डोको तल्लो तहमा स्थिति पट्टीको दाहिने छेउमा प्रदर्शन गरिएको छ।
सेक्सनको हालको लेखन सुरक्षा स्थिति ताल्चा लगाइएको प्रतीकद्वारा सूचीत गरिन्छ सूचीको सेक्सन नामको अगाडि. खुला ताल्चा लगाइएको असुरक्षित हुन्छ र बन्द ताल्चा लगाइएको सुरक्षित हुन्छ. त्यसैले, दृश्यात्मक सेक्सनहरू ग्लासहरूको प्रतीकद्वारा सूचीत गरिन्छ.
कागजातबाट रोज्नुहोस् गरिएको विभागहरू हटाउनुहोस्, र विभागको सामाग्रीहरू कागजातमा घुसाउनुहोस्.
Title is: सेक्सनहरू सम्पादन गर्नुहोस्